Thola inqevu elinentshebe: Uhambo olubaluleke kakhulu lokuhamba ngebhayisikili e - ULLER
Njengemidlalo eminingi ye-aerobic, ukuhamba ngebhayisikili kuyisiyalo esiphelele lapho kusetshenzwa khona inqwaba yemisipha yomzimba, futhi ngaphezu kwalokho, isebenza njengephilisi lemvelo elilimaza ukulimala okungokomzwelo okwenziwa ubuchopho bethu, okwenza ama-endorphin akhiqizayo. ukunqanda ukucindezeleka. Impela uma uke wazijwayeza ukuhamba ngebhayisikili noma ezinye izindlela zayo ngesikhathi esithile empilweni yakho uyazi ukuthi kunjani lapho usebhayisikili.
Luyini uvivinyo lwe-Bearded Vulture?
IQuebrantahuesos imashi yokuhamba ngebhayisikili enezindlela ezimbili ezihlukene ezigcinwe ndawonye: Inqe Elikhulu Lentshebe(200km) kanye Isigamu Esingezansi seCreeper (85km).
Okokuqala, sizokutshela okuthe xaxa mayelana ne- Inqe Elikhulu Lentshebe. Kuyisivivinyo ukuthi bangaphezu kuka-8000 ababambiqhaza abavela kuwo wonke umhlaba ababa khona unyaka nonyaka futhi babanjelwa eSpain futhi kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu eYurophu. Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amabili isebenza. Kwenzeka eSabiñánigo (Huesca) futhi ihlelwe yi-Edelweiss Cycling Club, okuyinhlangano enamavolontiya angaphezu kwe-1000 kuhlolo ngalunye oluzotholwa ngabahlanganyeli.
Kuwo bagijima 198 amakhilomitha nokungalingani ngokuphelele komzila cishe kungamamitha angama-3500. Linqamula emthambekeni waseFrance lize lifike ePyrenees. Izintaba ezine ziyadlula Ababambiqhaza bamapasi emashi yilawa: Portalet, Marie Blanque, Hoz de Jaca kanye naseSomport. Uma ungumlandeli walesi siyalo futhi ujwayele ukuhamba amabanga amade ngebhayisikili, awukwazi ukuphuthelwa isipiliyoni semashi yaseQuebrantahuesos ujabulela izindawo ezihlaba umxhwele kakhulu zezintaba ze-Aragonese. Ngaphandle kokungabaza, kuyinselele impela.
Ngakolunye uhlangothi, Isigamu Esingezansi seCreeper Inomzila wamakhilomitha angama-85 nomehluko ophelele kokuphakama kwamamitha ayi-1335. Ngokungafani neNqevu Yentshebe, le mashi ifaka kuphela kudlula izintaba ezimbili: phezulu kwePetralba kanye nechweba laseCotefablo, izindawo ezimbili lapho izingqimba zeSierra de Aragón zingabaphikisi abakhulu.
Funda okwengeziwe ngokuhamba ngebhayisikili; isiyalo esiholayo seNtshebe
Kuyaziwa ukuthi ukuhamba ngebhayisikili kuzalwe ngemuva nje kokusungulwa kwebhayisikili lokuqala; i-draisiana. Kwavela njengomsebenzi wokunyakaza lapho, ngaphezu kwalokho, izinto zazingathuthwa zisuka kwenye indawo ziye kwenye.
Kamuva, lapho ikhwalithi yamabhayisikili yayisivele iphakeme kakhulu, yaba yindumasi phakathi kwenqwaba njengomsebenzi wokuzithokozisa nokungancintisani ohlanganisa ezemidlalo nezokuvakasha. Namuhla ngomunye wemisebenzi efanele yokuhamba ngamabhayisikili, ngenxa yalokho ube yithuba elimangalisayo lokujabulela ukubukeka kwamaphupho ngenkathi uqhuba umdlalo onomvuzo njengokuhamba ngebhayisikili.
Uhlobo lwebhayisikili olusetshenziswe kulesi siyalo lungahluka. Singathola kusuka emigwaqeni, emabhayisikili awu-hybrid nawokuhleleka kuya kumabhayisikili angama-tandem. Konke kuyindaba yokwazi insimu okumele ihlanganiswe nezidingo zomuntu ngamunye zomgibeli wamabhayisikili.
Omunye wamaphayona ukuqala ukusebenzisa lesi siyalo njalo kwaba ngumuntu waseFrance uPaul De Vivie, umgibeli webhayisikili nentatheli okwathi lapho eneminyaka engama-22 ubudala wasungula isici esingemuva sebhayisikili (1887). Cishe kungenxa yemizila yayo engaphezulu kwamahora angama-40 ezindleleni zaseFrance ukuthi namhlanje silapha sikhuluma ngokuhamba ngebhayisikili. Ngabe ubulwazi lolu lwazi?
Zingaki izigaba ezikhona ku-Bearded Vulture?
Umashi Omkhulu Wentshebe Yentshebe uqukethe Izigaba ze-12 ezisuka ku- incwadi A eya ku-L futhi ngasinye sazo siqukethe ubulili nobudala obuthile, okuba isigaba K ukuphela kwaso esivuma amabhayisikili abantu abangaphezu koyedwa ohambweni. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlolwa Khuphuka has kuphela izigaba ezimbili (X no-Y) leyo ngxenye ababambiqhaza besifazane nabahlanganyeli besilisa.
Ngakho-ke, lapho ubhalisela noma iyiphi yale mizila emibili yemashi, kufanele ukhethe isigaba esihambelana nezimpawu zakho.
Yini okufanele ngiyenze uma ngifuna ukubhalisela uhlelo olulandelayo lwe-Bearded Vulture?
IBearded Vulture isivivinyo esenzeka ezindaweni ezinenani elikhulu lemvelo eFrance naseSpain, futhi ngenxa yalesi sizathu, inani labagibeli bamabhayisikili ababamba iqhaza kulo livinjelwe yinhlangano yemashi. Ngaphezu kwalokhu, ukufunwa kakhulu kwezicelo kusho ukuthi okuwukuphela kwendlela yokuqhuba i-Bearded Vulture kunoma yiziphi izindlela zayo ezimbili ukubhalisela i-raffle.
Ngale ndlela, uma ufuna ukusebenzisa i-Great Bottom Bearded Vulture noma i-Middle Bottom Treparriscos kuhlelo olulandelayo, kufanele ufake iwebhusayithi esemthethweni ye-Bearded Vulture bese ulandela imihlahlandlela yokubhalisa. Khumbula ukuthi kufanele ukhethe isivivinyo esisodwa kulezi ezimbili lapho ufaka isicelo sakho. Abantu ababambe iqhaza eminyakeni edlule komunye wale micimbi emibili bazoba nethuba uma kukhulunywa ngokwamukela izinombolo zabo kunamalungu amasha.
Uma usuhlanganyele ku-raffle, kufanele ube nelayisense evumelekile yokuhamba ngebhayisikili, noma uthathe umshwalense wosuku olulodwa ohlinzekwa yinhlangano. Ngakho-ke, intengo yesivivinyo izokhuphuka kuleli cala lesibili.
Ekugcineni, kuyadingeka ukwethula isitifiketi esivumelekile sokwelapha ngonyaka owodwa wokusebenza esicelweni sakho esiqinisekisa ukuthi ukulungele ukubamba iqhaza kuzo zombili izivivinyo ngaphandle kwemikhawulo. Inhloso kuphela yale nqubo ukuqinisekisa impilo yalowo nalowo wabahlanganyeli esivivinyweni.
Uma usuthumele wonke amafomu futhi wabelwa indawo, kufanele uhambe uyothatha inombolo yakho futhi konke kuzobe sekukulungele ukuqala ukuzijabulisa.
IMIBUZO EVAME UKUBUZWA MAYELANA NOKUQHUBEKA KWAMathambo
1. Iyini intengo yeNqe Yentshebe yakwaGran Fondo?
Ukubamba iqhaza kuraffle yendawo yemashi kuzodingeka ukhokhe ama-euro angama-4 lapho kubhaliswa. Ngemuva kwalokho, uma usuyitholile le ndawo, kuzofanele ukhokhe ama-euro angama-75 uma unelayisense yokuhamba ngebhayisikili noma ama-euro angama-87 uma ungenayo futhi kufanele uthathe umshwalense wemashi ngenhlangano.
2. Iyini intengo yeHalf Bottom Treparriscos?
Kufanele ukhokhe ama-euro ama-4 ukuze ubambe iqhaza emdwebeni wesikwele. Uma usunayo, uzokhokha ama-euro angama-65 uma unelayisense yokuhamba ngebhayisikili noma ama-euro angama-77 uma ungenayo futhi kufanele uthathe umshwalense enhlanganweni.
3. Imashi yaseGran Fondo ivamise ukuqeda emahoreni amangaki?
Abagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe bavame ukuyiqeda ngamahora ayi-6, kuyilapho bonke abanye be-amateurs bethatha amahora aphakathi kuka-7 no-12 ukufinyelela entanjeni.